ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထန်းလျက်ခဲ စားသုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး - Chit MayMay
Home Pregnancy Health ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထန်းလျက်ခဲ စားသုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထန်းလျက်ခဲ စားသုံးခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုး
ကြံသကာတို့ ထန်းလျက်ခဲတို့ဟာ သဘာဝပစ္စည်းစစ်စစ်မှာ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အပြင် ဆေးဖက်ဝင်တာကြောင့် အချိုတည်းစရာအဖြစ် ရှေးယခင်တည်းက ယခုအချိန်ထိ လူကြီးလူငယ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်စွာ စားသုံးကြတဲ့ မြန့်မာ့ အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထန်းလျက်ဟာ သန့်စင်ပြီးသား သကြားထက် ပိုပြီးကျန်းမာပါတယ်။ အချိုပွဲပြင်ဆင်တဲ့အခါ အဓိကအသုံးပြုပြီး ၎င်းမှာ သကြား၊ သံဓါတ်နှင့် သတ္တုဆားတို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ကြံသကာတို့ထန်းလျက်တို့ စားသုံးခြင်းက ကောင်းလား၊ မကောင်းဘူးလားဆိုတာနှင့် အန္တရာယ်ကင်းအောင် ဘယ်လို စားသုံးမလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထန်းလျက် စားတာက အန္တရာယ်ကင်းပါသလား?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ ထန်းလျက် စားနိုင်ပေမယ့် အကန့်အသတ်ဖြင့် စားပေးရပါမယ်။ ထန်းလျက်ခဲမှာ သံဓါတ်ကြွယ်ဝပါတယ်၊ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်သံဓါတ်လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သကြားရဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်ဖြစ်တာကြောင့် အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို မြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သံဓါတ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ကလေးရဲ့ အာဟာရကို ပေးစွမ်းဖို့အတွက် မိခင်နို့နှင့် သွေးကိုလည်း သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ သန့်စင်ထားတဲ့ သကြားအစား ထန်းလျက်ကို အစားထိုးပါ။
ကြံဖြင့် ပြုလုပ်တဲ့ ထန်းလျက်ကို သကြားအစားထိုးအချိုဓါတ်အဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်း ထန်းလျက်မှာ fructose၊ sucrose ၇၀%ကျော်၊ သတ္တုဓါတ် ၅% နှင့် glucose ၁၀% ထက်နည်းပြီး ပါဝင်ပါတယ်။
Food Processing and Technology ဂျာနယ်က ထုတ်ဝေတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ထန်းလျက် ၁၀၀ဂရမ်မှာ ကယ်လစီယမ်(40 to 100mg) ၊ ပိုတတ်စီယမ် ( (1056mg), မဂ္ဂနီဆီယမ် (70 မှ 90mg), ဆိုဒီယမ် (19 မှ 30mg),အိုင်းယွန်း (10 မှ 13mg), ဖော့စဖောရပ် (20 မှ 90mg), ဇင့် (0.2မှ 0.4mg), မန်းဂနိစ် (0.2 မှ 0.5mg), ကြေးနီ (0.1 မှ 0.9mg),နှင့်ကလိုရိုက် (5.3mg)တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အတွင်း ထန်းလျက်ခဲစားဖို့ လိုသလား?
ထန်းလျက်ဟာ သကြားအစားထိုး အချိုဓါတ်ကို ပေးစွမ်းယုံသာမဟုတ်ပဲ အာဟာရအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ပေးပါတယ်။ သံဓါတ်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း အဖြစ်များတဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ပိုတတ်စီယမ်က ဖောရောင်တာကို ကုသပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အီလက်ထရိုလိုက် မျှတမှုကို တည်ငြိမ်စေပါတယ်။ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များက အရိုး၊ အဆစ်တွေကို အာဟာရ ရရှိစေပါတယ်။ ထန်းလျက်ခဲဟာ အစာခြေအင်ဇိုင်းတွေကို အကူအညီပေးတာကြောင့် အစာကြေရင်ချောင်ပါတယ်။ ထန်းလျက်မှာပါတဲ့ သတ္တုဓါတ်နှင့် အင်တီအောက်ဆီဒင့်က ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး အအေးမိ၊ တုပ်ကွေးကဲ့သို့သော ဖျားနာမှုတွေကို ကုသပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်း ထန်းလျက်ရဲ့ ဖြစ်နိုင်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
ထန်းလျက်က အကျိုးရှိပေမယ့် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလို အများကြီးစားလို့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ထန်းလျက်အတုတွေ၊ အရောအနှော ထန်းလျက်တွေက တချို့ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်၊ ထန်းလျက်အလွန်အကျွံ စားတာက ကယ်လိုရီအရေအတွက်ကို တိုးပွားစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် တိုးစေပါတယ်။ သကြားက သွေးတွင်းသကြားအဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးတာကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆီးချိုရောဂါရှိပါက ပြဿနာဖြစ်စေပါတယ်၊ ထုတ်လုပ်မှု မသန့်ရှင်းတဲ့ ထန်းလျက်တွေမှာ ပိုးမွှားတွေပါနိုင်ပါတယ်။
ထန်းလျက်က နည်းလမ်းများစွာမှာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ စွယ်စုံပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ နို့ သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်ထဲ ထည့်သောက်လို့ရပါတယ်။ အချိုပွဲ ပူတင်းတွေ၊ မြန်မာမုန့်တွေမှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ မြေပဲထန်းလျက်၊ အုန်းထန်းလျက်၊ ဇီးထန်းလျက် စသဖြင့် လုပ်စားနိုင်ပါတယ်။
ထန်းလျက်ရဲ့ သဘောသဘာဝက ပူပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းဟာ ထိခိုက်မခံတဲ့ အဆင့်ဖြစ်တာကြောင့် နည်းနည်းသာ စားသုံးပါ။ ထန်းလျက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အတွင်းမှာ အကန့်အသတ်ဖြင့် စားသုံးပါ၊ သန့်စင်ပြီးသကြားနေရာမှာ အစားထိုးပါ။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ထန္းလ်က္ခဲ စားသုံးျခင္းရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳး
ႀကံသကာတို႔ ထန္းလ်က္ခဲတို႔ဟာ သဘာဝပစၥည္းစစ္စစ္မွာ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အျပင္ ေဆးဖက္ဝင္တာေၾကာင့္ အခ်ိဳတည္းစရာအျဖစ္ ေရွးယခင္တည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ လူႀကီးလူငယ္မေ႐ြး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ စားသုံးၾကတဲ့ ျမန္႔မာ့ အစားအစာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ထန္းလ်က္ဟာ သန္႔စင္ၿပီးသား သၾကားထက္ ပိုၿပီးက်န္းမာပါတယ္။ အခ်ိဳပြဲျပင္ဆင္တဲ့အခါ အဓိကအသုံးျပဳၿပီး ၎မွာ သၾကား၊ သံဓါတ္ႏွင့္ သတၱဳဆားတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္မွာ ႀကံသကာတို႔ထန္းလ်က္တို႔ စားသုံးျခင္းက ေကာင္းလား၊ မေကာင္းဘူးလားဆိုတာႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းေအာင္ ဘယ္လို စားသုံးမလဲဆိုတာကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ထန္းလ်က္ စားတာက အႏၲရာယ္ကင္းပါသလား?
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္မွာ ထန္းလ်က္ စားႏိုင္ေပမယ့္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ စားေပးရပါမယ္။ ထန္းလ်က္ခဲမွာ သံဓါတ္ႂကြယ္ဝပါတယ္၊ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္သံဓါတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ေပးပါတယ္။ သၾကားရဲ႕ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ အလုံးစုံက်န္းမာေရးကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သံဓါတ္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ကေလးရဲ႕ အာဟာရကို ေပးစြမ္းဖို႔အတြက္ မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေသြးကိုလည္း သန္႔စင္ေပးပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ အစားအေသာက္ထဲမွာ သန္႔စင္ထားတဲ့ သၾကားအစား ထန္းလ်က္ကို အစားထိုးပါ။
ႀကံျဖင့္ ျပဳလုပ္တဲ့ ထန္းလ်က္ကို သၾကားအစားထိုးအခ်ိဳဓါတ္အျဖစ္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွာ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္း ထန္းလ်က္မွာ fructose၊ sucrose ၇၀%ေက်ာ္၊ သတၱဳဓါတ္ ၅% ႏွင့္ glucose ၁၀% ထက္နည္းၿပီး ပါဝင္ပါတယ္။
Food Processing and Technology ဂ်ာနယ္က ထုတ္ေဝတဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ထန္းလ်က္ ၁၀၀ဂရမ္မွာ ကယ္လစီယမ္(40 to 100mg) ၊ ပိုတတ္စီယမ္ ( (1056mg), မဂၢနီဆီယမ္ (70 မွ 90mg), ဆိုဒီယမ္ (19 မွ 30mg),အိုင္းယြန္း (10 မွ 13mg), ေဖာ့စေဖာရပ္ (20 မွ 90mg), ဇင့္ (0.2မွ 0.4mg), မန္းဂနိစ္ (0.2 မွ 0.5mg), ေၾကးနီ (0.1 မွ 0.9mg),ႏွင့္ကလို႐ိုက္ (5.3mg)တို႔ပါဝင္ပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အတြင္း ထန္းလ်က္ခဲစားဖို႔ လိုသလား?
ထန္းလ်က္ဟာ သၾကားအစားထိုး အခ်ိဳဓါတ္ကို ေပးစြမ္းယုံသာမဟုတ္ပဲ အာဟာရအက်ိဳးေက်းဇူးေတြလည္း ေပးပါတယ္။ သံဓါတ္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေသြးအားနည္းေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ပိုတတ္စီယမ္က ေဖာေရာင္တာကို ကုသေပးၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အီလက္ထ႐ိုလိုက္ မွ်တမႈကို တည္ၿငိမ္ေစပါတယ္။ ဗီတာမင္ႏွင့္ သတၱဳဓါတ္မ်ားက အ႐ိုး၊ အဆစ္ေတြကို အာဟာရ ရရွိေစပါတယ္။ ထန္းလ်က္ခဲဟာ အစာေျခအင္ဇိုင္းေတြကို အကူအညီေပးတာေၾကာင့္ အစာေၾကရင္ေခ်ာင္ပါတယ္။ ထန္းလ်က္မွာပါတဲ့ သတၱဳဓါတ္ႏွင့္ အင္တီေအာက္ဆီဒင့္က ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး အေအးမိ၊ တုပ္ေကြးကဲ့သို႔ေသာ ဖ်ားနာမႈေတြကို ကုသေပးပါတယ္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္း ထန္းလ်က္ရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
ထန္းလ်က္က အက်ိဳးရွိေပမယ့္ တန္ေဆးလြန္ေဘးဆိုသလို အမ်ားႀကီးစားလို႔ မေကာင္းပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ထန္းလ်က္အတုေတြ၊ အေရာအေႏွာ ထန္းလ်က္ေတြက တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္၊ ထန္းလ်က္အလြန္အကြၽံ စားတာက ကယ္လိုရီအေရအတြက္ကို တိုးပြားေစၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တိုးေစပါတယ္။ သၾကားက ေသြးတြင္းသၾကားအဆင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးတာေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိပါက ျပႆနာျဖစ္ေစပါတယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ မသန္႔ရွင္းတဲ့ ထန္းလ်က္ေတြမွာ ပိုးမႊားေတြပါႏိုင္ပါတယ္။
ထန္းလ်က္က နည္းလမ္းမ်ားစြာမွာ အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ စြယ္စုံပစၥည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏို႔ သို႔မဟုတ္ လက္ဖက္ရည္ထဲ ထည့္ေသာက္လို႔ရပါတယ္။ အခ်ိဳပြဲ ပူတင္းေတြ၊ ျမန္မာမုန္႔ေတြမွာ ထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။ ေျမပဲထန္းလ်က္၊ အုန္းထန္းလ်က္၊ ဇီးထန္းလ်က္ စသျဖင့္ လုပ္စားႏိုင္ပါတယ္။
ထန္းလ်က္ရဲ႕ သေဘာသဘာဝက ပူပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အေစာပိုင္းဟာ ထိခိုက္မခံတဲ့ အဆင့္ျဖစ္တာေၾကာင့္ နည္းနည္းသာ စားသုံးပါ။ ထန္းလ်က္ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္အတြင္းမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ စားသုံးပါ၊ သန္႔စင္ၿပီးသၾကားေနရာမွာ အစားထိုးပါ။
Previous articleကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိဘများသိထားသင့်တဲ့ ဘာဖြစ်ရင် ဘယ်နေရာကို နှိပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ
Next articleနို့တိုက်ကျွေးဖို့အတွက် ကလေးကို နှိုးသင့်သလား?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘေဘီလေးရဲ့ကန်ချက်ကနေ ပြောပြနေတဲ့အရာ (၁၀)ချက်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျော့ချနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းများ
စစ်မှန်တည်မြဲတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ အဆင့် ၆ ဆင့်ရှိတယ်(6 Step Of Love)
သင့်ကလေးကို သင့်စကားနားမထောင်ဖို့ မတော်တဆလေ့ကျင့်ပေးမိနေတဲ့အရာ( ၅)ချက်
သင့်ရဲ့ ရာသီခွင်အရ သင်ဟာ ဘယ်လိုအမေမျိုးလဲ
Mom and Baby134
သင့်ကလေးက Dyslexia ဖြစ်နေကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
Nyein Thu - May 29, 2020 0